Universal Online TV | के हामी नेपाली साच्चै कहिले देखि सुखी र खुसी छौ??? के हामी नेपाली साच्चै कहिले देखि सुखी र खुसी छौ???
के हामी नेपाली साच्चै कहिले देखि सुखी र खुसी छौ???
००७ साल देखि २००७४ सम्म करिब ६७ बर्ष भित्र हामीले देशमा प्रजातन्त्र, बहुदलिय ब्य्बस्था, गणतन्त्र र संघीयता ल्याको नै हो! जनता येस्तो जाडो मा टहरामा बस्न पाकै छन, रु १००० ले एक झोला तरकारि पाएकै छन ! गाउँ घरमा उत्पादन भएको बस्तु नबिके पनि कृषिप्रधान देशमा खरोबौको कृशिजन्य खाद्यसामाग्री आयेत गरेकै छौ! जत्ती मूल्य बढे नि सहेकै छौ! होटेल रेस्टुराँ खोले कै छन तडक भडक बढ्दो छ ! जनताले मोज मस्ती गरेकै छन ! गाउमा सिटामोल डाक्टर नभए पनि बाचे कै छन!! सहर बजारमा च्याउ उम्रेको झै अस्पतालहरु खुलेकै छन!
बिकासको नाउमा INGO खोलेकै छ!! आ- आफ्नाले जागिर पाएकै छन!!गाउमा एक गाग्री पानी लिन टाढा भएनी जनता धाए कै छ्न! बिद्यार्थीहरुTube र Twoin, काठेपुल तरेर, स्कुल थोत्रा भए नि पढे कै छन! गाउमा अस्पताल डाक्टर नभएर के भो शहर बजारमा च्याउ सरि उम्रेकै छन! सडक साघुरो र बाटो घाटो बिग्रेकाले हजारौ मान्छे दुर्घटनामा मरेकै छन! राजधानिको सडक मा धुलो धुवा उडेकै छ! सडक साघुरोभए नि हजारौं गाडिहरु भित्रेकै छन!
धनी आसाध्य्र धनी छन गरिब झन झन गरिब बन्दै छन !! जलश्रोतको धनी भए पनि सयौं मेघावाट बिजुली किनेकै छौ! सयौ उद्योग धन्दा बन्द गराएर युवाहरु बेरोजगारी भै आफ्नो खेत वारि बाझो राखेर बिदेशमा पसिना बगाउन गएकै छन!! शिक्षइत युवाहरु बिदेशमा पलाएन हुँदै जाने क्रम बढ्दो छ!! GDP बढेकै छ क्यारे !! बुढा बुढी गाउमा एक्लै राखेर छोराबुहारी; छोराछोरी पढाउन गाउ घरमा ताल्चा मारेर सहर बजारमा जत्ती दुख भए नि बसाइँ सरेको सरै छन!! सामाजिक रुपान्तरण को नाउमा समाजमा छेत्री,बाहुन,दलित, नेवार र जनजाति भनी एक आपसमा लडाउने /होच्याउने काम भएकै छ! धर्मको नाउमा एउटा मन्दिर भत्क्यो भने १० वटा चर्च बनेकै छन!!अनि के के हो के के ……? देश समृद्ध बनाउन ३ करोड मात्र जनता भएको राज्यमा सयौ मन्त्रीहरु मुख्य मन्त्रीहरु थपिदो छ! सानो देशमा सयौ राजधानी बन्ने क्रम जारी छ!!!!